देउवालाई क–कसको समर्थन? यस्तो छ सरकारको अंकगणित
Home∕राजनिति∕देउवालाई क–कसको समर्थन? यस्तो छ सरकारको अंकगणित
June 3, 2017 June 3, 2017 koselihk 0
[et_pb_section bb_built=”1″ admin_label=”Section” fullwidth=”on” specialty=”off” transparent_background=”off” allow_player_pause=”off” inner_shadow=”off” parallax=”off” parallax_method=”on” make_fullwidth=”off” use_custom_width=”off” width_unit=”on” make_equal=”off” use_custom_gutter=”off”][et_pb_fullwidth_code admin_label=”Fullwidth Code” /][/et_pb_section][et_pb_section bb_built=”1″ admin_label=”Section” fullwidth=”off” specialty=”off” transparent_background=”off” allow_player_pause=”off” inner_shadow=”off” parallax=”off” parallax_method=”on” make_fullwidth=”off” use_custom_width=”off” width_unit=”on” make_equal=”off” use_custom_gutter=”off”][et_pb_row admin_label=”Row” make_fullwidth=”off” use_custom_width=”off” width_unit=”on” use_custom_gutter=”off” custom_padding=”7.5%||7%|” padding_mobile=”on” allow_player_pause=”off” parallax=”off” parallax_method=”off” make_equal=”off” parallax_1=”off” parallax_method_1=”off” column_padding_mobile=”on”][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text admin_label=”Text” background_layout=”light” text_orientation=”center” max_width=”86%” text_text_color=”#070707″ use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid” custom_css_main_element=”font-weight:900;” text_font=”Source Sans Pro||||” text_font_size_last_edited=”on|desktop” text_line_height=”1.9em”]
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा मुलुकको प्रधानमन्त्री हुने निश्चित भइसकेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम, अखण्ड पार्टी नेपाल, नेकपा संयुक्त र समाजवादी जनता पार्टीको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीका लागि शनिबार नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवन पुगेर उम्मेदवारी दर्ता गराएका देउवा मुलुकको ४० औं प्रधानमन्त्री हुने पक्कापक्की छ।
प्रतिपक्षले प्रधानमन्त्री निर्वाचन प्रक्रिया अवरुद्ध गरेन भने आइतबार देउवा आफ्नो जीवनकालको चौथो पटक प्रधानमन्त्री हुनेछन्। जीवित नेतामध्ये सबैभन्दा बढी पटक प्रधानमन्त्री हुने व्यक्ति देउवा नै हुन्। कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र राप्रपाका तत्कालीन अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापामात्रै यस्ता व्यक्ति हुन् जो देउवाभन्दा बढी प्रधानमन्त्री भए। देउवाले चौथो पटक प्रधानमन्त्री हुन भने निकै ठूलो पापड पेलेका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढालेर नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई प्रधानमन्त्री बनाएर गठबन्धन टुटाइदिएका थिए।
स्थानीय तहको निर्वाचन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गराउने र त्यसपछि कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने दुई दलबीचको भद्र सहमति अनुसार नै देउवा आइतबार प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुग्न लागेका हुन्। २०६१ सालमा राजा ज्ञानेन्द्र शाहको बर्खास्तीमा परेपछि देउवालाई १२ वर्ष ४ महिनापछि सत्तारोहणको साइत जुरेको छ।
देउवालाई प्रधानमन्त्रीका लागि नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम, अखण्ड पार्टी नेपाल, नेकपा संयुक्त र समाजवादी जनता पार्टीले अहिलेसम्म समर्थन गरेका छन्। तत्काल सरकारमा नजाने तर समर्थन भने गर्न संघीय समाजवादी फोरम नेपाल लगभग तयार भइसकेको छ। राप्रपा भने सरकारमा सहभागी हुन सकारात्मक देखिएको छ। यस्तै राजपा नेपालले पनि आफूका माग पूरा गर्न देउवाले प्रतिबद्धता जनाए समर्थन गर्न सक्ने बताएको छ।
कांग्रेसका २०६, माओवादी केन्द्रका ८१, नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी १६, नेकपा संयुक्त ३, अखण्ड पार्टी नेपाल १ र समाजवादी जनता पार्टीका १ जना सांसद गरी अहिलेसम्म देउवालाई ३०८ जनाको समर्थन प्राप्त भइसकेको छ।
यस्तै, राप्रपा ३७ र संघीय समाजवादी फोरम नेपाल १५ ले पनि समर्थन जनाए देउवालाई ३६० सांसदको समर्थन रहनेछ। संविधान संशोधन नभएसम्म स्थानीय तह निर्वाचनमा सहभागी नहुने बताएको राजपा नेपालले आफ्ना माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए सरकारलाई समर्थन गर्न सक्ने बताएको छ। यस्तो हुँदा देउवा सरकारलाई ३८२ सांसदको समर्थन रहनेछ।
संसदमा हाल कायम रहेको ५९४ मध्ये प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुन जम्मा २९६ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। जसका लागि देउवालाई प्रधानमन्त्री हुन बहुमत जुटिसकेको छ।
विपक्षमा कुन– कुन दल?
संसदमा रहेको दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेले विपक्षमा बस्ने बताइसकेको छ। उसले आफ्नोतर्फबाट उम्मेदवार नउठाए प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा विपक्षमा मतदान गर्ने भनिसकेको छ।
एमालेसँगै नेकपा माले, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, नेपाल परिवार दल, राष्ट्रिय जनमोर्चालगायतका दलहरु विपक्षमा बस्ने लगभग निश्चित जस्तै छ। यस्तो हुँदा विपक्षमा एमालेको १८२, मालेको ५, नेमकिपा ४ र नेपाल परिवार दल २ गरी १९३ सांसद रहने छन्।
दुईतिहाइ पुर्‍याउन देउवाको कसरत
आफू नेतृत्वको सरकारका पक्षमा दुई तिहाइ बहुमत पु¥याउन देउवाले कसरत गरिरहेका छन्। त्यसका लागि देउवाले नेताद्वय विमलेन्द्र निधि र रमेश लेखकलाई खटिएका छन्।
देउवा सरकारका पक्षमा दुईतिहाइ बहुमत पु¥याउन उनीहरुले राजपा नेपाल, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, राप्रपालगायत केही सबैजसो साना दलहरुलाई सरकारमा सहभागी गराउन पहल गरिरहेका छन्।
सरकारका पक्षमा दुई तिहाई बहुमत जुटे संविधान संशोधन प्रस्ताव पास गर्न सजिलो हुने भएकाले देउवाले उनीहरुलाई जसरी पनि सरकारमा ल्याउन चाहेका छन्। कांग्रेस नेता रमेश लेखकले आइतबार विहान ११ बजे अघिसम्म सरकारका पक्षमा दुईतिहाइ बहुमत पु¥याउन प्रयास गरिने बताए।
‘अहिलेसम्म देउवाका पक्षमा बहुमत प्राप्त भइसकेको छ। हाम्रो प्रयत्न सवै दललाई सरकारमा सहभागी गराउने हो। त्यही अनुसार कम्तिमा दुई तिहाइ बहुमत पु¥याउन लागि पर्छौं,’उनले भने।
उनले मन्त्रालयको बाँडफाँडका विषयमा कांग्रेस र माओवादीबीच कुरा मिलिसकेको र अन्य दललाई दिइने मन्त्रालयबारे भने छलफल चलिरहेको बताए। भोलिसम्म मन्त्रालयको पनि टुंगो लागि सक्ने बताए।
कांग्रेसले सभापति देउवालाई समर्थन गर्न आग्रह गर्दै संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुलाई पत्र पनि पठाइसकेको छ।
साहारा साँझको लागि जम्बो कलाकार हङकङमा
देउवाको चौथो सत्तारोहणमा ३ सय ६० सांसदको समर्थन : यस्तो छ संसदको अङ्क गणित!